सरकारले समृद्धिको सपना बाँडेर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको कांग्रेस सभापतिको आरोप, नेकपाका नेता सोध्छन् ‘चारपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले के गरे?’ - radionrn.com
सरकारले समृद्धिको सपना बाँडेर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको कांग्रेस सभापतिको आरोप, नेकपाका नेता सोध्छन् ‘चारपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले के गरे?’
प्रकाशित मिति : शनिबार, बैशाख २८, २०७६
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि सरकार निरंकुश बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । प्रेससहित सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेर सरकारले अधिनायकवादको रुप धारण गरिरहेको देउवाको आरोप छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता देउवाले संसदमा सभामुखको भूमिका पनि राम्रो नभएको बताउनुभयो । देउवाले मुलुकको विकासका लागि नेकपाको सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेसको सरकार भएका बेला गरिएका विकासका कामलाई पनि वर्तमान सरकारले आफूले गरेको भन्दै प्रचार गरिरहेको देउवाको आरोप थियो ।
उहाँले ओली सरकारबाट विकासको अपेक्षा राखेका जनता निराश भइसकेको बताउनुभयो । तर यता सत्तारुढ नेकपाका नेता लेखराज भट्टले भने चार चार पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले विकासका नाममा केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । चार पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला केही नगर्ने तर अहिले समृद्धिको यात्रामा रहेको सरकारलाई जभाभावी आरोप लगाउन नहुने भट्टको संकेत थियो ।
देउवासमेत सहभागी एक कार्यक्रममा नेता भट्टले चारपटक प्रधानमन्त्री भएर देउवाले के के गर्नसक्नु भएको छ त्यसको समिक्षा स्वम उहाँले नै गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सत्तामा रहेका बेला जनताको विकासको चाहना पूरा गर्नु नेताहरुको दायीत्व हो किनभने सबै नेताले चुनावका बेला जनतासामु विकासको बाचा गरेर भोट मागेका हुन्छन् । तर सत्तारोहण भएपछि भने विकास नामको शब्द नेताहरुले सुन्न नै नचाहने गरेको आम जनताको आरोप छ । जनचाहना बमोजिम विकासको सपना पूरा गर्न नेपालका नेताहरुलाई कसले रोकेको छ ? प्रश्न जटिल नभएपनि यसको उत्तर नेताहरुले अहिलेसम्म पनि सजिलो ढंगले दिन सकेका छैनन् ।
पहिरोमा पुरिएर ६ जनाको मृत्यु
दैलेखमा बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, सात घाइते
नेकपाका संस्थापक पुष्पलालको सम्झना
कार्यकर्ता पोस्दै ठिक्क स्थानीय सरकारका दुई वर्ष
विवादका कारण नेकपा बैठक स्थगित
सारा विश्वलाई चकित पार्दै नेपाली बैज्ञानिक : के काम गरे त त्यस्तो ?
राजनीतिक दस्तावेजः अमेरिका र भारतप्रति नेकपा नरम
नेपाली रेडियो नेटवर्कको “नेपाली बहस ” : श्रावण ०७
‘शिशिर’को मर्मस्पर्सी गीतः भन्देउ चरी रुनु पर्दैन भिडियो सहित
होङ्सी सिमेन्टले उठीबास गराएको भन्दै स्थानीय आक्रोसीत, कम्पनीको गैह्रजिम्मेबार जवाफ (रिपोर्ट)
अमेरिका छाड्न राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी
नेपाली काँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनबारे बहस अझै कायम रहने
नेपाली रेडियो नेटवर्कको “नेपाली बहस ” : श्रावण ०२
नेपाली रेडियो नेटवर्कको “नेपाली बहस ” : श्रावन ०१
विदेशीका लागि बढाइएको भिसा शुल्क बुधबारदेखि लागू हुने
सिनामंगलको ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
नेपाली रेडियो नेटवर्कको “नेपाली बहस ” : श्रावण ०४